Mazana mazana matatu + Makumi Makumi Makumi Mahara eImbwa - Sarudza iro Rakanakisa Zita reiyo White Puppy - Mazita Embwa
Mazana mazana matatu + Makumi Makumi Makumi Mahara eImbwa - Sarudza iro Rakanakisa Zita reiyo White Puppy
Makorokoto nekuwedzera kutsva kumhuri yako. Imbwanana itsva yasvika iri muchimiro che chitsvuku chena che fluff , uye ikozvino kwedambudziko rakaomesesa pane ese, kusarudza zita rembwa chena.
Imbwa chena dzinouya mumhando dzose uye saizi, asi dzese dzakanaka zvakaenzana, kubva kuPomeranian kusvika kuSamoyed uye Dalmatian.
Paunenge uchisarudza zita rembwa yako, yeuka kuti uchapedza makore mazhinji uchishevedzera izvi mupaki yako yemuno, nekudaro zvakakosha kusarudza zita raunoda uye iro riri nyore kududza (zvine musoro imwe kana maviri syllable imwe).
Heino runyorwa rwemazita mazana matatu chena imbwa mazita ekukubatsira iwe mune iyo-yakakosha shungu yekutsvaga izita rakaringana rako chena mbwanana. Huru kana diki, murume kana mukadzi, ngatitangei.
Akanakisa Akachena Imbwa Mazita
Muchena Mukadzi Mukadzi Mazita
Vakachena Varume Varume Imbwa Mazita
Mapenzi Muchena Mazita Emazita
Akanaka machena Imbwa Mazita
Mudiki Muchena Imbwa Mazita
Kutsvaga akanakisa mazita eako anonakidza chena puppy? Heano edu epamusoro makumi maviri mapiki emazita machena imbwa mazita.
Gore - Yakakwana kune fluffy chena imbwa
Igloo - Inopfupisa kuna Iggy
Ghost - SaJon's Direwolf muMutambo Wechigaro
Allegra - Zita reItaly rinoreva 'kufara'
Rex - chiLatin che 'mambo'. Yakakwana kune imbwa chena imbwa
Bhatani - Seyakanaka sebhatani
Kukwira - Kukasira dappy doo
Cassiopeia - Mambokadzi mungano dzechiGiriki
Dianna - Mwarikadzi weRoma wekuvhima nemwedzi
Lady - Kune yakanyanya humambo imbwa
Badar - zvichireva 'Mwedzi Uzere' muchiArabic
Nari - 'Lily' muchiKorea
Saturn - Mwari weRoma wepfuma
Albus - Inokodzera imbwa seye chena ndebvu dzaDumbledore
Kunyara - 'Joyous chipo' muchiHeberu
Stella - Zita rekudenga
Apricot - Izita rakanaka kana iwe uine imbwa iri isingawanzo apricot kupenda
Mwoyo wako wakaisa pambwa hadzi here? Kana zvikaitika kuti akachena, heano mamwe mazita ekufunga nezvembwanana yako nyowani:
Artemis - mwarikadzi wechiGiriki wemwedzi
Belle- 'yakanaka' muchiFrench
Bianca - 'chena' muchiItaly
Blanca - zvichireva 'chena' muchiSpanish
Chardonnay - Iyo inotapira yaini chena waini kune imbwa dzinodakadza
Dhaimondi - Sezvo madhayamondi ari shamwari yemusikana yepamoyo!
Lola - Ainzi Lola ...
Misty - zita rakakura kune imbwa ine mhando ine husky .
Rosalba - chiLatin chinoreva 'chena ruva'
Tahani - 'zvishuwo zvakanaka' muchiArabic
Wakatenga here ine simba uye yemitambo Dalmatia kana pamwe kufefetera kufudza Samoyed? Chero nzira, iwe wafunga kutenga mukomana imbwa.
Heano anopfuura makumi mashanu emazita edu eedu machena echirume mazita ekuti iwe ufungire pamusoro:
Adonis - Zita rechiGiriki rinoreva kuti 'Ishe'
Anjo - Ngirozi muchiPutukezi
Casper - SeMweya
Chico - 'Mukomana' muchiSpanish
Flash - Muponesi wezvose
Sirius - Mushure meye nyeredzi nyeredzi
Tito - chiGiriki zvinoreva 'Defender'
Zeus - Yakakwana kune imbwa hombe
Unosarudza zita rinosetsa kune mumwe wako? Heano edu edu mamwe ekutora kwedu anonakidza machena mazita embwa uye vamwe vanopopota kubuda kune imbwa dzakakurumbira munhau.
Aya mazita anosetsa uchaita kuti uungudze :
Ben (uye / kana Jerry)
Blizzard - Yakakwana kune bouncy imbwa
Frodo - Senge kubva kuna Ishe weRings
Pluto - Chinja yako yemukati Disney nerd
Schnee - 'Chando' muchiGerman
Winnie the Poodle - Yakakwana yePpuoodle
Wakakwanisa here tsvaga iyo yakachena chena imbwanana ? Aya madiki, tii-mukombe wakakura, pooches ane fluffy, furry uye akazara nekunakidzwa!
Sarudza chimwe chinhu chinotapira padiki pooch yako nyowani yakakwana? Heano mazano edu emazita machena machena imbwa mazita - akakwana embwanana yako.
Buttermilk - Masutu imbwa diki, chena inokatyamadza
Caterina - chiItaly zvinoreva kuti 'akachena'
Freckles - Inonakidza kana imbwa yako iine mamwe mabara
Gidget - iyo Pomeranian kubva kuChakavanzika Hupenyu hweZvipfuyo
Lakshmi - Zita rechiHindi rinoreva chiratidzo chakanaka
Lumière - 'Chiedza' muchiFrench
Moana - Mambokadzi weDisney
Muchinda kana Princess
Ren - Iro Unisex zita reJapan
Usha - French zvichireva Little Bere
Kana iwe uine moyo wako wakaiswa pazita rembwa hombe, tarisa runyorwa rwedu rwemazita makuru embwa .
Unosarudza imbwa diki kune hombe? Ivo vanogona kurongedza yakawanda mawonero mune iyo diki muviri, uye voita akakwana lap imbwa.
Heano mamwe emamwe mazano edu emazita madiki machena imbwa.
Adah - chiHebheru chinoreva 'runako'
Carlin - Zita reIrish rinoreva 'shasha shasha'
Dobby - Harry Potter chero munhu?
Elf (kana Elfie)
Jellybean - Asi ipfupikiswa kuBeanie!
Mija - akadaro MI-ha
Papillion - ChiFrench che 'butterfly'
Ryan - zita reIrish rinoreva 'mambo mudiki'
Ted (kana Teddy)
Tiny - Rimwe zita hombe re imbwa chena
Uye ipapo unayo, mazana matatu emazita edu emhando chena eruvara akakodzera chero chena mbwanana.
Kana iwe uchifunga kuti wawana zita, ita chokwadi chekupa iro shoma bvunzo kumhanya. Edza kutaura zvinhu se 'Rex, nguva yekudya kwemanheru!' kana 'Caitlin? Unoda kumbofamba famba here? ” kuimba isina chinhu kuti uone kuti unofarira kurira kwaro zvakadii - zvakare zvinokubatsira iwe kudzidzira kugadzira zita idzva rembwa yako kuti riitike.
Nderipi zita raunofunga kuti ndiro rakanakisa pazvinyorwa zviri pamusoro? Kana kuti pane zita raunoda ratakatadza here? Ive neshuwa yekutisiira komoti inotizivisa.
Morkie Imbwa 101: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva
Hushamwari, unoshuvira kufadza: Zvese nezve iyo Gomo reGomo reGomo
labrador retriever uye german shepherd mix
black lab uye gomba musanganiswa